Android 4.2 နဲ့အထက် ဖုန်းတွေမှာ KitKat သုံးမယ် - .::just for share::.
Home » android » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » Android 4.2 နဲ့အထက် ဖုန်းတွေမှာ KitKat သုံးမယ်
Android 4.2 နဲ့အထက် ဖုန်းတွေမှာ KitKat သုံးမယ်
Android 4.2 နဲ့အထက် ဖုန်းတွေမှာ KitKat ရဲ့အရသာကို ခံစားလိုသူများ အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း KitKat Launcher ကို ထည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးကို ကိုသွားပြီး Android 4.4 Launcher zip file ကို download လုပ်ပါ။
- ပြီးရင် zip file ကို extract လုပ်ပြီး apk များကို ဖုန်းမှာ ထည့်သွင်းပါ။
- PrebuiltGmsCore.apk ကို install လုပ်ပါ။
- ပြီးရင် Velvet.apk ကို install လုပ်ပါ။
- GoogleHome.apk ကို install လုပ်ပါ။
- အဲ့ဒီနောက် Home button ကိုနှိပ်ပြီး Launcher ကိုရွေးပါ။
ဒါဆိုရင် Android 4.4 KitKat Launcher ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။